प्रचण्ड र ओलीको भेट पातलींदो, पार्टी एकता र सरकार गठन अब के होला ? – Bisal Chautari
प्रचण्ड र ओलीको भेट पातलींदो, पार्टी एकता र सरकार गठन अब के होला ?
- १९ पुष २०७४, बुधबार १०:३४ मा प्रकाशित
Find Prachand and Oli’s Meetings
काठमाडौँ ,२०७४ पुस १९ बुधबार । प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा चुनावतामा कुम जोडेर हिंडेका एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भेटघाट अहिले निकै पातलो बनेको छ ।
यी दुई अध्यक्षबीचको भेटघाट पातलिनुका पछाडि व्यक्तिगत र आ–आफ्नो पार्टीका स्वर्थ रहेको पाइन्छ । प्रचण्ड पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमध्ये एउटै हुनु पर्ने माआवादीको धारणा रहेको छ । वाम गठबन्धनको सरकार बन्ने कुराको चर्चा चलेको लामो समय भए पनि सरकार गठनको प्रारम्भिक प्रक्रिया नै शुरु हुन सकेको छैन । एकताबारे ठोस छलफल निकाल्न आज भेट्ने भनिए पनि भेट हुने सम्भावना नरहेको दाहालको सचिवालयले जनाएको छ। ‘अहिलेसम्म भेटको समय टुंगो लागेको छैन, सायद आज भेट हुँदैन होला,’ दाहालको सचिवालयका एक सदस्यले भने।
एमाले अध्यक्ष ओलीलाई केही दिनयता झाडा पखाला लागेको थियो। मंगलबार साँझदेखि उनको स्वास्थ्यमा सुधार आएको छ तर पूरै निको भएको छैन। माओवादी अध्यक्ष दाहालसँग आज हुने भेटबारे भने टुंगो नलागेको ओलीको सचिवालयले जनाएको छ। माओवादी नेता मणि थापाका अनुसार बैठकमा प्रचण्डले एकतापछि नेतृत्वमा ५०र५० प्रतिशत हुनु पर्ने धारणा राखेका थिए।